Amabinzana kaPeter Lynch: Elona li-17 lilungileyo, ngubani uPeter Lynch kunye nendlela atyala ngayo | Ezezimali
UPeter Lynch Quotes
IClaudi Casal | 26/05/2021 14:12 | Uqoqosho ngokubanzi
Xa sifuna ukufunda okanye ukuqala ngesihloko esingakhange sikuchukumise ngaphambili okanye kutshanje, eyona nto intle ukuyenza kukufumanisa, ukufundisisa kunye nokujonga abantu abadumileyo abakuloo ntsimi. Kwilizwe lezoqoqosho kuyafana. Abatyalomali abakhulu kunye noqoqosho banamacebo amaninzi okusidlulisela kuthi, kungaze khe kube buhlungu ukusifundela ubulumko babo, njengamabinzana kaPeter Lynch.
Izimali zinzima kakhulu kwaye ziyingozi xa kuziwa kutyalo-mali. Ngenxa yoko Kuya kufuneka sifake konke esinako ngaphambi kokuba siveze imali yethu ngaphandle kokwazi ukuba senza ntoni. Ngesi sizathu sinikezele eli nqaku kwiingcaciso zikaPeter Lynch. Ukongeza, siza kuthetha kancinci malunga nokuba ngubani le economist edumileyo nokuba yeyiphi ifilosofi yotyalo-mali.
1 Amabinzana ali-17 aphambili kaPeter Lynch
2 Ngubani uPeter Lynch?
2.1 Utyalomali njani uPeter Lynch?
Amabinzana ali-17 aphambili kaPeter Lynch
Kulindelwe ukuba, kwiminyaka emininzi kangaka yomsebenzi kwilizwe lezemali, uPeter Lynch uqokelele inani elikhulu lamabinzana athi Banokusebenza njengesikhokelo kubo bonke abo bathatha isigqibo sokuqala kwiimarike zamanye amazwe. Emva koko siza kubona uluhlu lweyona ibinzana li-17 libalaseleyo likaPeter Lynch:
"Isitshixo sokwenza imali esitokisini asoyiki."
"Ungaphulukana nemali kwixesha elifutshane, kodwa ufuna ixesha elide ukuze wenze imali."
“Kubalulekile ukuba wazi ukuba kukho inkampani egcina zonke izinto ezikhoyo, kwaye inye kuphela eyona nto ibangela ukuba isitokhwe sikhuphuke. Iinkampani zihamba kakubi zisiya kwintsebenzo elungileyo, okanye ezincinci zikhula zibe nkulu.
"Ukuba awuyihlalutyi iinkampani, unamathuba afanayo okuphumelela njengomdlali we-poker ukubheja ngaphandle kokujonga amakhadi."
Utyalo-mali bubugcisa, hayi inzululwazi. Abantu abatyekele ekubaleni ngokungqongqo yonke into basesichengeni. "
"Ungaze utyale kwingcinga ongenakukuzekelisa ngepensile."
"Eyona nkampani intle onokuyithenga inokuba sele unayo kwiphothifoliyo yakho."
Ngaphandle kwaxa kukho imimangaliso emikhulu, iintshukumo ziqikelelwa ngamashumi amabini eminyaka. Nokuba bazokunyuka okanye behle kule minyaka mibini okanye mithathu izayo, kuyafana nokuphosa ingqekembe. "
“Ukuba uchithe ngaphezu kwemizuzu elishumi elinesithathu uxoxa ngorhwebo noqikelelo lwezoqoqosho, umoshe imizuzu elishumi.
"Ukuba uyayithanda ivenkile, uya kuthanda isenzo."
Tyala imali kwizinto oziqondayo.
"Ungaze utyale imali kwinkampani ngaphandle kokuqala wazi iingxelo zayo zemali."
«Kwixesha elide, unxibelelwano phakathi kwempumelelo yokusebenza kwenkampani kunye nempumelelo yayo kwimarike yemasheya yi-100%. Oku kwahluka kungundoqo ekwenzeni imali. "
"Ukuba ibhodi ithenga izabelo kwinkampani yayo, kuya kufuneka wenze njalo."
"Alukho lonke utyalomali olufanayo."
"Tyala imali kwizitokhwe phambi kwayo nayiphi na enye impahla."
"Awunakulibona ixesha elizayo usebenzisa isipili esingumbono."
Ngubani uPeter Lynch?
Ukuze siwaqonde kakuhle amabinzana kaPeter Lynch, kufuneka sazi ukuba ngubani le ngcali yezoqoqosho kwaye yintoni ifilosofi yakhe yotyalo-mali. Ngelo xesha yenye yezona ndawo zibalulekileyo nezixabisekileyo kubaphathi beeasethi kwihlabathi liphela. Uphethe ingxowa-mali yeFidelity Magellan, egqame ngokufumana imbuyekezo yonyaka engama-29% ngonyaka we-1977 ukuya kowe-1990, iminyaka engama-23 iyonke. Ngesi sizathu, uLynch uthathwa njengomnye wabaphathi bengxowa-mali abaphumeleleyo kwimbali yonke. Ukongeza, ngumbhali weempapasho ezininzi kunye neencwadi ezijongana nezicwangciso zotyalo-mali kunye neemarike.
Utyalomali njani uPeter Lynch?
Owona mgaqo uthandwayo kaPeter Lynch lulwazi lwasekhaya, Oko kukuthi, ukutyala imali kwinto eyaziwayo. Kuba uninzi lwabantu luthanda ukubalasela kwiindawo ezithile, ukusebenzisa le ngcamango isisiseko kunceda abatyali mali bafumane izitokhwe ezilungileyo nezingaxabisekanga. Izimvo eziqaqanjiswe ngulo sosayensi wezoqoqosho Gcina imali kwiinkampani ezinamatyala amancinci, ezinenzuzo zikwisigaba sokukhula kwaye izabelo zazo zingaphantsi kwexabiso lazo lokwenyani. Oku kuboniswa ngamanye amabinzana nguPeter Lynch.
Iingcaphuno zikaGeorge Soros
Kwi-Lynch, lo mgaqo ubonakalisa indawo yokuqala kulo lonke utyalomali. Ukongeza, amatyeli aliqela uphawule ukuba, ngokutsho kwakhe, Utyalo-mali lomntu ngamnye unethuba elingcono lokuphumelela kunye nokwenza imali kunomphathi wengxowa-mali. Kungenxa yokuba kunokwenzeka ukuba ufumane amathuba amahle otyalo-mali kubomi bakho bemihla ngemihla.
Ngokubhekisele kwezinye iifilosofi zotyalo-mali, uPeter Lynch uye wagxeka kaninzi oko kubizwa ngokuba ixesha lentengiso. Imalunga nomzamo wokuqikelela amaxabiso exesha elizayo. Ngokutsho kwakhe, "Ininzi imali ilahlekile ukuzama ukulindela ukulungiswa kweemarike kunokulungiswa ngokwalo." Nangona kungabonakali kwiluhlu lwethu lwezona zinto zingcono uPeter Lynch amabinzana, ngokungathandabuzekiyo kukubonakalisa okukhulu ukwenza.
Ndiyathemba ukuba ezi ngcaphuno zikaPeter Lynch ziluncedo kunye nenkuthazo kuwe. Ziingcebiso ezilungileyo kunye nokubonakaliswa, ngakumbi ukuba sibatsha kwilizwe lezemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » UPeter Lynch Quotes